Iapp.Xiaomi.Com Tiktok Isihleli seApk Khuphela iGoogle
apps ekhaya Social
»I-App.Xiaomi.Com Tiktok Isihleli se-Apk Khuphela i-Android
4.7 / 5 ( 16 iivoti )
I-TikTok ivinjelwe kumazwe ahlukeneyo kwaye ukubona le ngxaki kuzisa isicelo se-android esisesinye endaweni yeTikTok kwaye igama lokusebenza yi-App.Xiaomi.Com Tiktok Mhleli. Ukuza kuthi ga ngoku le yeyona ndlela ilungileyo ye-Apk yokwazisa ngabaphuhlisi.
Kule mihla iTikTok yeyona ndawo inomdla kwiMedia yoLuntu phakathi kwabasebenzisi be-android ekufumanekayo ukuba ukhuphele kwi Ivenkile zikaGoogle. Idume kakhulu phakathi kolutsha kwaye ngenxa yokwanda kokuthandwa kwayo ngoku abantu abadala bayayisebenzisa njengezolisayo ukukhulisa abahlobo babo kunye namalungu osapho.
Kodwa ngenxa yezizathu ezithile, iTikTok ivinjelwe ngaphakathi kumazwe ahlukeneyo njenge-India, Saudi Arabia ne-UAE njl. Ngokujonga njengangoku abaqulunqi bemeko bagqiba ekubeni benze iapk ye-android esebenza ngenye indlela kwiTikTok.
Ngaphandle kwalesi siCwangciso seXiaomi Tiktok saphuhliswa. I-Apk igubungela amanqaku afanayo ngaphakathi kweTikTok kodwa bongeze le counter entsha ngaphakathi ebizwa ngokuba yi-Social Media Counter. Ukusuka apho ababukeli banokwabelana ngeeklip zevidiyo ngokuthe ngqo kwiiforamu zeNtlalontle zeNtlalo.
Iqhosha Lokukhuphela ngokuthe ngqo lenza ababukeli bakhuphele iiklip zevidiyo ezithandayo ngaphakathi kwiifowuni zabo. Ukuba ufuna ukwenza i-database apho banokugcina khona, babelane kwaye bade babukele iividiyo kamva ngexesha mahala.
Yintoni iApp.Xiaomi.Com Tiktok Mhleli
Indlela yokukhuphela kunye nokufaka iApp
Sisicelo se-android esenzelwe ngokukodwa ukugxila kubasebenzisi be-android abangenakho ukufikelela kwi-TikTok kwaye ivinjelwe ngokusisigxina ngaphakathi kwilizwe labo. Khuphela le Apk iza kwenza umsebenzisi ukuba enze iividiyo ezincinci ezifakela iifilitha ezahlukeneyo kwaye abelane ngazo ngaphezulu kwamaqela kunye neeakhawunti.
Nditsho neZiko leMithombo yeendaba zeNtlalontle zongezwa ngaphakathi koovimba bokwenza umenzi azi malunga nenani lezabelo kunye nezinto azithandayo. Ngenxa yempawu zayo ezingafaniyo nezinamandla, le forum yevidiyo imfutshane kwakhona iyaziwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi ngexesha elifutshane.
Eyona njongo iphambili yokubonelela le Apk kukubonelela ngamathuba okusebenzisa ezinye ii -apps kuneTikTok. Ukuba ukhangela enye indawo kwiTikTok kunokuba sikucebisa ukuba ufake le Apk ngaphakathi kwiselula yakho. Siyakuqinisekisa ukuba akuyi kudanisa.
igama App.Xiaomi.Com Siktok Isihleli
ubungakanani 80.55 MB
Igama lepakheji com.ss.android.ugc.aweme
Inxalenye enomdla malunga nale app kukuba ungabona kwaye uhlangane nesithandwa sakho sokuqala ukulandela iiakhawunti zabo. Ewe, usivile kulungile, ii-superstars zezamashishini amafilimu ahlukeneyo asebenzisa le forum yokonwabisa abalandeli babo ngexesha.
Uhlelo lokusebenza lusimahla lokukhuphela kunye nokufaka ngaphezulu kwee-smartphones. Ukuba ukhangela iqonga apho ungabonakalisa italente yakho ngendlela yeziqendu ezimfutshane. Ngaphandle kwale Apk igqibelele, cofa iqhosha lokukhuphela kwaye ubonise italente yakho kwihlabathi liphela.
Abasebenzisi abanetalente enjalo abakholelwa ukuba isakhono sabo sahlukile kwaye sinomtsalane kunokwazisa abanye abantu malunga nesakhono sokurekhoda iiklip zevidiyo.
Ababukeli banokufunda izakhono ezinxulumene nemimandla eyahlukeneyo ngokubukela ezi vidiyo zimfutshane.
ISuper Stars yeyamashishini ahlukeneyo amafilimu ayakhona ukulandela.
Kwanombukeli unokujonga kwaye alandele amabanga ahlukeneyo. Ukuba uyawuthanda umculo badinga ukulandela icandelo lomculo. Udidi lomculo lubandakanya umculo opera, weklasikhi, rock kunye nomculo osisiseko.
Inkqubo yokukhuphela ilula kakhulu kwaye kulula ukuyenza. Konke okufuneka ukwenze kukucofa nje kwikhonkco lokukhuphela kwaye ukhuphelo lwakho luya kuqala ngokuzenzekelayo. Siqinisekisa ukuba sinika ikhonkco lakamuva lokukhuphela ikhonkco likaApp.Xiaomi.Com Tiktok Umhleli ngaphakathi kwinqaku.
Nje ukuba ugqibile ngokukhuphela inyathelo elilandelayo kukufakwa nokusetyenziswa kwe-Apk. Nangona ilula, kuncedo lwabasebenzisi sinikezele inyathelo ngalinye apha.
Kuqala, yiya kwicandelo lesitroli sefowuni kwaye ufumane ifayile ye-Apk kwiFolder yokukhuphela.
Cofa kwi-Apk ukuqala inkqubo yokufaka.
Nje ukuba ifakwe ngokupheleleyo, yiya kwimenyu ephathekayo kwaye ucofe kwi-icon ye-App.
Emva kokuvulwa kwe-app, unokufikelela kumxholo wokuzonwabisa ongenamkhawulo mahala.
Unokuzama kunye nezinye iiTiktok Alternatives.
Siyakholelwa kude kube ngoku le yeyona ndawo ithathe indawo yeTikTok. Abasebenzisi be-Android banokuzikhuphelela ngaphandle mahala. Ngelixa ukhuphelayo okanye usebenzisa i-Apk, ukuba udibana nayo nayiphi na ingxaki zive ukhululekile ukunxibelelana nathi. Iqela lethu leengcali liya kukufikelela ngokukhawuleza nje ukuba sifumane umbuzo wakho.
App.Xiaomi.Com Siktok Isihleli
App.Xiaomi.Com Tiktok Isihleli seApk
I-App.Xiaomi.Com Tiktok Isixhobo soMhleli